Matahotra ny 'fandroana rà', manomboka miala amin'ny trompetra ireo loholona repoblikana - New York Times - TELES RELAY
Liona antonony; Ny ekipa fitantanana vaovao
Goldman Sachs handoa $ 3 miliara eo ho eo amin'ny raharaha 1MDB - Vaovao…
WASHINGTON - Nandritra ny efa ho efa-taona, ny repoblikana kaongresy dia nanaloka sy nanalavitra ny cascade fanambaràna manafintohina sy ny fitondran-tena manapotika ny filoham-pirenena Trump, tsy niraharaha ny fahana Twitter sy ny fanaparitahana Twitter azy ary ny fitiavany ny orthodoxy an'ny antoko, ary nijanona tamim-pahanginana izy rehefa nandao ny tafika. mpiara-dia, nanafika andrim-panjakana amerikanina ary niteraka tahotra fanavakavaham-bolon-koditra sy fanavakavahana.
Saingy ankehitriny, manoloana ny isam-bato mahakivy sy ny volan'ny demokratika ary ny hafanam-po nandoto ny maro an'isa tao amin'ny Antenimieran-doholona, ​​ny Repoblikana ao amin'ny Capitol Hill dia manomboka manalavitra ny filoham-pirenena ampahibemaso. Ny fiovana, telo herinandro latsaka talohan'ny fifidianana, dia manondro fa maro ny Repoblikana no nanatsoaka hevitra fa andramana ho amin'ny fatiantoka Andriamatoa Trump amin'ny Novambra. Ary izy ireo dia mitazona ny famonjena azy ireo ary mihazakazaka mamerina amin'ny laoniny ny lazany ho an'ny tolona ho avy ho an'ny mombamomba ny antokony.
Senatera Ben Sasse avy any Nebraska nalefa tamin'Andriamatoa Trump tamin'ny hetsiky ny lapan'ny tanàna an-telefaona niaraka tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny Alarobia, nanoloana ny valintenin'ny filoha manoloana ny areti-mifindra voan'ny coronavirus ary niampanga azy ho “filalaovana fitia” amin'ny mpanao didy jadona sy ny fotsy hoditra mazoto ary ny fanilihana ny mpifidy fa mety hiteraka «fandroana rà repoblikana» ao amin'ny Antenimieran-doholona izy. Nanome fehezanteny iray avy amin'ny Senatera Ted Cruz avy any Texas izy, izay nampitandrina ny amin'ny fandroana rà repoblikana ny fizarana Watergate. ” Ny loholona Lindsey Graham avy any South Carolina, iray amin'ireo mpiara-dia am-peo indrindra amin'ny filoha, naminavina ny filoham-pirenena very very ny Trano Fotsy.
Na ny senatera Mitch McConnell, Repoblikan'i Kentucky ary mpitondra ny maro an'isa aza, dia be vava noho ny mahazatra tato anatin'ny andro vitsivitsy momba ny tsy fitovizany amin'ny filoha, mandà ny fiantsoany "handeha be" amin'ny volavolan-dalàna mandrisika. Izany dia taratry ny zava-misy fa ny Repoblikana Senat - izay tsy dia nifanaraka tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny fandraisana andraikitra lehibe mpanao lalàna tao anatin'ny efa-taona - dia tsy te-hifidy ny karazana drafitra fanampiana federaly mitentina tapitrisa dolara izay Nanapa-kevitra tampoka Andriamatoa Trump dia liana amin'ny fahaizany mamihina.
"Ny mpifidy dia kasaina hitarika ny bara farany eo amin'ny Repoblikana Senat sy Trump," hoy i Alex Conant, mpanampy ny Senatera Marco Rubio ary mpitondra tenin'ny White House teo aloha. “Mora kokoa ny mirindra rehefa mandresy amin'ny fifidianana ianao ary mahazo fahefana. Fa rehefa eo amoron'ny hantsana mety ho fatiantoka manan-tantara ianao dia tsy dia misy firariana ny hiaraka fotsiny. ”
Ny Repoblikana dia afaka mihantona tsara amin'ny Trano Fotsy sy ny Antenimieran-doholona, ​​ary Andriamatoa Trump dia mbola mitazona mafy ny toeran'ny antoko, ka izany no mety ho antony sasany amin'ireo fanta-daza noho ny fitsikerana azy indrindra, toa an'Andriamatoa Sasse sy ny loholona. Mitt Romney avy any Utah, dia nandà ny hanaovana fanadihadiana momba ny ahiahin'izy ireo.
Saingy ny fitondran-tenan'izy ireo vao haingana dia nanolotra valiny amin'ny fanontaniana efa nieritreretana hatrizay raha toa ka hisy ny fotoana mety handavan'ny Repoblikana filoha iray izay nilaza matetika sy nanao zavatra nanimba ny foto-kevitr'izy ireo sy ny hafatr'izy ireo. Ny valiny dia toa ny fotoana natahoran'izy ireo hanohintohina ny fahaveloman'izy ireo ara-politika.
Tohizo ny fifidianana 2020
Raha nisy Repoblika Senat sasany nanoratra ny vintana azon'Andriamatoa Trump, dia mety hitovy ny fahatsapana. Ny zoma dia namoaka ny azy ny filoha fanafihana Twitter farany tamin'ny Senatera Susan Collins an'ny Maine, iray amin'ireo tompon'andraikitra Repoblikana tandindomin-doza indrindra, toa tsy niahiahy fa mety hanimba ny vintana izy, miaraka amin'ny fanantenan'ny antoko hitazona ny Antenimieran-doholona.
Tamin'ny fanambarana ny zoma teo, Andriamatoa Romney dia nanameloka ny filoham-pirenena noho izy tsy te-hanameloka an'i QAnon, ilay hetsika firaisana tsikombakomba mpomba an'i Trump izay lazain'ny FBI fa fandrahonana ho fampihorohoroana ao an-toerana, tamin'ny filazany fa ny filoham-pirenena dia "mivarotra varotra" fotokevitra "ho an'ny fanantenana fandresena amin'ny fifidianana." Io no fanambarana manelingelina azy faharoa tamin'ity herinandro ity nitsikera an'Andriamatoa Trump, na dia natambatr'Andriamatoa Romney tamin'ny fitsikerana ny Demokraty aza ny roa tonta, ary nilaza fa nizara-tsiny ireo roa tonta ireo.
Na izany aza Andriamatoa Romney sy ireo Repoblikana hafa izay nilaza ny hanome faminaniana mahatsiravina na fanehoana ahiahy momba an'Andriamatoa Trump dia mifikitra amin'ny filoham-pirenena amin'izay mety ho asany lehibe farany talohan'ny fifidianana: ny fanamafisan'ny mpitsara Amy Coney Barrett, a ankafizin'ny mpandala ny nentin-drazana, ny Fitsarana Tampony.
Hita taratra ny dichotomy nanaiky ny Repoblika kongresy fifanarahana fifampiraharahana nandritra ny naha filoham-pirenena Andriamatoa Trump, izay nandefan'izy ireo ny fitondran-tenany mirehitra sy ny fanambarana izay fantany fa hampandroso ny laharam-pahamehany bebe kokoa izy, ao anatin'izany ny fametrahana ny maro an'isa mpandala ny nentin-drazana ao amin'ny fitsarana ambony ao amin'ny firenena.
Na izany aza, ny tontolon'ny politika manjombona dia nanomboka ny fifanandrinana, indrindra eo amin'ireo Repoblikana manana hetahetam-politika miitatra mihoatra ny fiadidian'Andriamatoa Trump, mba ho eo amin'ny laharana voalohany amin'ny famerenan'ny antoko.
"Rehefa miharihary fa olom-belona politika toa ny olon-drehetra izy, dia manomboka mahita ny fanaovana jockeying ianao amin'ny hoavin'ny antoko Repoblikana," hoy i Carlos Curbelo, kongresista repoblikana teo aloha izay nanao toa an'i Florida. tsy manohana an'Andriamatoa Trump tamin'ny taona 2016. "Ny zavatra henontsika tamin'ny Senatera Sasse omaly dia ny fiandohan'io dingana io."
Tamin'ny resadresaka nifanaovana dia nilaza Andriamatoa Curbelo fa ireo mpiara-miasa aminy taloha dia efa amam-bolana maro no nahafantatra fa Andriamatoa Trump indray andro any dia "ho lasa ambanin'ny lalàna mifehy ny hery politika" - ary hiatrika ny vokany ny antoko.
17 Oktobra 2020, 11:49 maraina ET
"Fantatry ny ankamaroan'ny Repoblikanina kongresy fa maharitra maharitra izany, ary izy ireo dia lasa - mety ho antsoin'ny olona sasany ho pragmatic, ny sasany mety hiantso azy io ho mpanararaotra - mitazona ny lohany ary manao izay tokony hataony eo am-piandrasana ity fotoana ity ho avy, ”hoy izy.
Tsy fantatra mazava raha mitady hamaritra ny antokony ny Repoblikana raha resy ny filoham-pirenena, satria ny fotoana nitondran'ingahy Trump dia nampiseho ny fampiakarana ny mariky ny politikany marihitra amin'ny fototra mpandala ny nentin-drazana.
"Mbola manana fitaomana lehibe sy lehibe tokoa izy - ary haharitra mandritra ny fotoana lava - amin'ny mpifidy voalohany, ary izany no andraiketan'ireo mpikambana," hoy i Brendan Buck, mpanolotsaina teo aloha tamin'ny mpandahateny roa an'ny Repoblika farany.
Ny tadiavin'Andri Sasse sy Andriamatoa Cruz, hoy ihany izy, dia ny fikasana farany hitahiry ny fifehezana ny Repoblika ny Senat.
"Raha hainao ny miteny mafy azy dia misy hafatra mahomby fa ny Antenimieran-doholona Repoblikana dia mety ho fizahana an'i Washington tantanan'ny Demokratika," hoy Andriamatoa Buck. "Sarotra fotsiny ny milaza izany amin'ny feo avo satria tokony hanaiky ny filoham-pirenena ianao dia vita."
Eo amin'ny làlana fanaovana fampielezan-kevitra, ny repoblikana dia miaina manokana amin'ny filoham-pirenena noho ny fisintomany ireo kandidàn'ny Senat, ary nandefa ny tolona nitanjozotra namaky ny fanjakana izay fiarovana mafy nentin'ny Repoblika izy.
"Ny fahalemeny amin'ny fiatrehana ny coronavirus dia nametraka seza betsaka kokoa noho izay noeritreretintsika herintaona lasa izay," hoy i Whit Ayres, mpandinika sy mpanolo-tsaina repoblikana. “Fantatray foana fa hisy hazakazaka senat akaiky maromaro, ary angamba nilomano nanohitra ny onja tany amin'ny toerana toa an'i Arizona, Colorado ary Maine izahay. Fa rehefa mahita ireo fanjakana mifamatotra tsara ianao, toa an'i Georgia sy North Carolina ary South Carolina, dia milaza aminao fa nisy zavatra nitranga tao amin'ny tontolo iainana midadasika kokoa. ”
Tamin'ny 2016, rehefa toa nitady hisambotra ny fanendrena ny antoko Andriamatoa Trump, izay kandida tamin'izany, Andriamatoa McConnell dia nanome toky an'ireo mpikambana ao aminy fa raha mandrahona ny hanao ratsy amin'izy ireo izy amin'ny fifidianana ankapobeny, Hatsipin'izy ireo toy ny vatolampy mafana izy ”.
Tsy nisy izany ary tsy azo inoana izao, miaraka amin'ny Repoblikana hiatrika ny fifidianana indray no mahatsapa fa ny mpifidy demokratika dia mety tsy hanome valiny noho izany, indrindra fa ny andron'ny fifidianana. Saingy nisy hetsika hafa, misimisy kokoa.
Na eo aza ny fangatahana ampahibemaso imbetsaka nataon'i Andriamatoa Trump ho an'ny Repoblikana handray fonosana fanentanana areti-mifindra lehibe kokoa, dia nandà ihany Andriamatoa McConnell, nilaza fa ny loholona amin'ny antokony dia tsy hanohana fonosana mitovy habe amin'izany velively. Nikomy tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ny Repoblikana Senat tamin'ny fifampiresahana niaraka tamin'i Mark Meadows, lehiben'ny mpiasa ao amin'ny filoha, ary nampitandrina fa ny fifanarahana fandaniam-bola be dia be dia be dia be amin'ny "famadihana" ny tobin'ny antoko ary handotoana ny antontan-taratasin'izy ireo amin'ny maha alika ara-bola azy ireo.
Ny fananarana manokana dia avy amin'i Andriamatoa McConnell tamin'ny herinandro lasa teo rehefa nilaza tamin'ny mpanao gazety ilay Kentuckian, izay hisolo tena ny fifidianana, fa tsy nety nitsidika ny Trano Fotsy hatramin'ny faramparan'ny fahavaratra izy noho ny fikirakirany ny coronavirus.
"Ny fahitako azy ireo dia ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny fomba hitantanana an'io dia tsy nitovy tamin'ny ahy sy ny nikiriko fa hataonay any amin'ny Antenimieran-doholona," hoy Andriamatoa McConnell.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany (tamin'ny teny anglisy) tao amin'ny https://www.nytimes.com/2020/10/16/us/politics/republican-senators-trump.html
Firaisana ara-nofo araka ny voalazan'i Maïa Mazaurette: "fitomboan'ny firaisana ara-nofo, fanesorana ny meloka taloha" - Video
Goldman Sach dia handoa $ 3 Mily $ efa ho 1 amin'ny raharaha XNUMXMDB - New York Times
Ilay mpandraharaha tanora Kameroney dia nahazo ny loka natokana ho an'ny CEO ao Nizeria